शनिदेव: यी राशिका व्यक्तिहरूले शनिबाट टाढा रहनुपर्छ, शत्रुको आत्मा राख्छ ! - Mitho Khabar
June 21, 2022 mithokhabarLeaveaComment on शनिदेव: यी राशिका व्यक्तिहरूले शनिबाट टाढा रहनुपर्छ, शत्रुको आत्मा राख्छ !
उज्यालो नेपाल बनेपा ,
शत्रुको रूपमा यी राशि चिन्हहरू: शनि एक महत्त्वपूर्ण ग्रह मानिन्छ। पौराणिक कथा र शास्त्रहरूमा शनिलाई सूर्यको पुत्र र कर्मदाता भनिएको छ। शनिदेवलाई न्यायाधीश पनि भनिन्छ। कलियुगमा मानिसको कर्मको लेखा शनिले मात्र दिनुहुन्छ। यही कारणले गर्दा मानिसहरु शनिदेवसँग डराउँछन् । तर यो होइन कि शनिदेवले सधैं खराब परिणाम दिन्छ। शनिले केही राशीबाट शत्रुको भाव राख्छ।
मंगल ग्रहसँग शनिको शत्रुता छ। मंगललाई मेष राशिको स्वामी मानिन्छ। यो शनि र मंगलमा बन्दैन। यसै कारण मेष राशिमा शनिको महादशा, शनि सती र धैय्या सुरु हुँदा उनीहरुको जीवनमा समस्याहरु बढ्ने गर्दछ । शनिले धन हानि र काममा बाधा पुर्याउछ ।
ज्योतिष शास्त्रका अनुसार कर्कट राशिका व्यक्तिहरूलाई शनिले आफ्नो विशेष अवस्थामा पनि समस्या दिन्छ। चन्द्रमालाई यस राशिको स्वामी भनिन्छ। शनिदेवको चन्द्रमासँग शत्रुता छ। यही कारणले गर्दा कुंडलीमा शनि र चन्द्रमाको संयोग हुँदा विष योग बन्ने गर्छ । यो योग बन्ने राशिमा मानसिक समस्या र अज्ञात भयको समस्या रहन्छ । जसका कारण व्यक्तिले सही निर्णय लिन सक्दैन र नोक्सान बेहोर्नुपरेको छ ।
राशि अनुसार सिंह राशिलाई पाँचौं राशि मानिन्छ। ज्योतिषशास्त्र अनुसार यस राशिको स्वामी सूर्य हो। सूर्यलाई ग्रहहरूको शासक भनिन्छ। तर यसपछि पनि शनिबाट सूर्य बनिसकेको छैन। दुवैलाई एकअर्काका शत्रु मानिन्छ । जहाँ शनिदेव सूर्यका पुत्र हुन् । तर शनि आफ्नो बुबालाई घृणा गर्नुहुन्छ। यी कारणले शनिदेवले सिंह राशिका मानिसहरूलाई सादे सती र धैयाको समयमा विशेष कष्ट दिनुहुन्छ।
Disclaimer =यहाँ प्रदान गरिएको जानकारी केवल अनुमान र जानकारीमा आधारित छ। यहाँ यो उल्लेख गर्न महत्त्वपूर्ण छ कि Ujaylo nepal.com ले कुनै पनि प्रकारको मान्यता, जानकारी पुष्टि गर्दैन।
खुसिको खबर चुरोट छोड्नेलाई ६० हजार रुपैयाँ पुरस्कार दिने सरकारको निर्णय